Halista Dagaal Qabaw oo adduunka ka qarxa oo laga digey | Xaysimo
Home War Halista Dagaal Qabaw oo adduunka ka qarxa oo laga digey
Halista Dagaal Qabaw oo adduunka ka qarxa oo laga digey
isku eedaynta Karoonaha
Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Shiinaha ayAA isku maandhaafay arrinta coronavirus-ka shirkan golaha guud ee Qaramada Midoobay ee New York. Madaxweyne Trump ayaa ka sheegay in Beijing ay adduunka ku soo deysay belaayo, ayna waajib tahay in lagula xisaabtamo dhimashada uu keenay waxa uu ugu yeeray “feyraska Shiinaha”.
Safiirka Shiinaha ayaa diiday eedeymahaas oo ay ku tilmaameen mid aan sal iyo raad toona lahayn. Khudbadiisa fiidiyowga, Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping wuxuu cambaareeyay isku day kasta oo lagu siyaasadeynayo fayraska. Wuxuu sheegay in Shiinuhu uusan damacsanayn inuu “dagaal qabow ama mid kulul” la galo dal kale.
Mike Pompeo ayaa kal isna hore sheegay in ay hayaan caddaymo waaweyn oo muujinaya in coronavirus uu ka soo unkamay sheeybaadh ku yaalla magaalada Wuhan oo ah halkii uu markii hore ka soo bilowday ahayd xanuunkan saf-marka ahi, dabayaaqadii sannadkii tagay. Seynisyahanno badan ayaa aaminsan in coronavirus uu ka soo unkamay xayawaanada duurjoogta ah ee lagu kala iibsado seyladaha dalkaasi Shiinaha.
Warbaahinta CCTV ee Shiinaha ayaa si adag uga falcelisay hadalka Pompeo iyagoo sheegay in hadalkiisauu yahay mid la iska yiri oo aan loo meel dayin uuna Pompeo sidoo kale been faafinaya. Waa Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP.
Warbixinta CCTV ayaa sidoo kale lagu sheegay in siyaasiyiinta Mareykanka ay ku dagdagyaan edeyenta iyagoo utaag la’ xaddidaadda coronavirus oo dadaalkoodii uu noqdayba hal bacaad lagu lisay.
Hay’adda Caafimaadka Adduunka ayaa sheegtay in Mareykanka uusan ilaa haatan soo badhigin cadeyn muujineysa hadalkooda ku aaddan in fayraska Corona uu ka soo unkamay sheeybaar ku yaalla dalkaasi Shiinaha.
Tan iyo markii uu cudurkaasi ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha dabayaaqadii sannadkii hore, ayaa coronavirus waxaa la xaqiijiyay inuu ku dhacay ku dhawaad 3.6 milyan oo qof oo ku nool daafaha dunida halka in ka badan 249,000 oo qofna ay u dhinteen.